Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ye-Blue Mountains - I-Airbnb
Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ye-Blue Mountains
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Carrie
Siyakwamukela endlini yethu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ethokomele etholakala ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo edolobhaneni lase-Blue Mountain. Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni isanda kubuyekezwa, kuhlanganise nombhede omkhulu kanokusho.
Ebusika, jabulela ubusuku bokuphumula ngasemlilweni, ngemva kosuku emathafeni. Ehlobo, jabulela isikhathi echibini, ngemva kosuku enkundleni yegalofu. Indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni inakho konke okudingayo ukuze uvakashe ngokuthula. Jabulela isevisi yamahhala yezokuthutha edolobhaneni, unyaka wonke.
*Qaphela ukuthi ngenxa ye-Covid akuwona wonke amasevisi atholakalayo.
Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Blue Mountain Village eyingqophamlando. Yidla ngesitayela e-O&B, uphumule ku-patio enokubukeka okuhle kwechibi nezintaba, noma ujabulele ukunambitheka ngokushesha.
Sebenzisa ngokunenzuzo yonke imisebenzi edolobhaneni okuhlanganisa: ukuhamba ngezinyawo, ukushushuluza eqhweni, igalofu, ukugibela i-gondola, inkambo yezintambo, nokunye okuningi.
*Sicela uqaphele ukuthi ngenxa ye-Covid-19 akuwona wonke amasevisi atholakalayo.
I-Snowbridge ngumphakathi ohlaba umxhwele, othulile. Ngaphandle nje kwezihlahla ezizungeze indlu, yi-Monterra golf course. Thatha uhambo olufushane, noma isevisi yezokuthutha yamahhala ukuya e-Blue Mountain Village, lapho izinto ezenziwayo ezingapheli, izindawo zokudlela nezitolo zilindile. Ngokuvamile kuzoba nomculo obukhoma, noma ukuzijabulisa endaweni yedolobhana.